Ukudubula - Ubunjiniyela beDelta
Faka kungobo yomlando kusuka kusigaba "Ukuhluza"
NgoLwesine, 13 Mashi 2014 by Ubunjiniyela beDelta
Le yunithi yokubhoboza iphahlela izimbobo zokufaka imigqomo ekhoneni ephezulu yemigqomo ye-L-ring (imigqomo).
Gwema ukuvuza, ngoba akukho ukubhoboza okuhilelekile! Futhi, akukho sikhuhla sokudonsa epulasitiki.
Ingasetshenziswa ngokuhambisana nekhwalithi yethu ye-QC060.
Ishicilelwe ku Ukushaya
Umakwe ngaphansi: isigubhu, uhlelo lokushaya, drain hole, umgodi wokudonsa, Umphimbo we-L, Isigubhu esingu-L, umgqomo, ukuvuza, ukubhola, i-angle yokumba, indandatho ephezulu, hole punching, indawo yokubhoboza, DDR200, kukhipha izimbobo, ukudonsa izimbobo, khipha amanzi, donsela amanzi, ukubhoboza izimbobo, umhloli ovuzayo, gwema ukuvuza